Kambodza: Mizotra misimisy kokoa amin’ny ho avin’ny natiora organika. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2009 8:48 GMT
Mikirakira an-tsehatra ireo vaovao bolongana Phnom Penh mikasika ny fihemoran’ny fivezivezen’ny sakafo tamin’ny 10 Febroary 2009 ny mpitoraka bolongana ao amin’nyCAAI News Media sy i Khmer Stars. Miresaka ny filozofian’ny fanamboarana ny sakafo ho tsara, madio sy mendrika manoloana ny fihenan-tsakafo ny loharanom-baovao, ary milaza izy hoe amin’ny fomba ahoana no ampiharana izany filozofia izany ao Kambodia. Nanao fanadihadiana ny tompon’ny hotely fisakafoanana tao Phnom Penh ny loharanom-baovao, koa nanazava izy fa raha atao ny fampitahana dia madio ny nofon-tany eto amin’ny firenena:
“Hitan’izy ireo kosa aloha fa ny tanin’i Kambodza dia tsy mbola voararaka zavatra simika na famonoam-boalavo, satria ny ady tao anatin’ny 30 taona no antony tamin’ny ankapobeny” hoy izy. “Ary tena marina, fa ny hatsaran’ny vokatra avy any Kambodia dia tsara aok’izany – mbola tsara lavitra noho ireo izay avy any amin’ny faritra hafa aza.”
Eto indray, araka ny vaovao bolongana Phonom Penh nozarain’ i Vuthasurf tamin’ny 17 Febroary 2009:
Mampiasa matetika ny fanafody simika miaraka amin’ny famonoam-boalavo sy ny asidra Hydroklorika ny mpivarotra sakafo mba hitahirizana ny sakafo na hanome endrika izany entina hisintonana ny mpividy, hoy Chhouv Kong Phally, talen’ny programan’asa momba ny fampahafantarana ny fahasalamana ao amin’ny minisiteran’ny fahasalamana.
Nidera lavitra ny hatsaran’ny voankazo Kambodzianina noho ireo izay avy amin’ny faritra mpifanila vody-rindrina i Vuthasurf tamin’ny Novembre 2008.
Amin'izao fotoana izao dia saiky nampiasana fanafody simika fampitomboam-botoaty sy famonoam-boalavo ny vokatra avy amin'ny voankazo any amin'ny firenena manodidina tahaka ny any Vietnam sy Thailandy nefa mety hanohitohina fahasalaman'ny olombelona izany…Mandre matetika kambodziana aho miteny fa tsara noho ny karazam-boankazo any amin'ny firenena manodidina ny voankazo kambodziana.
Manohana ny tantsaha hamboly vokatra araka ny natiora organika ny fikambanana toy ny Ivo-toerana Kambodiana momba ny fianarana sy ny fampandrosoana ny fambolena (CEDAC)
Sarin’ i Narith5 toa amin'ny Flickr and nahazoan-dalana tamin'ny alalan'ny Creative Commons.